Xisbiga SD oo markii ugu horeeysay ka hadlay arrinkii Egor Putilov - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhismaha baarlamanka Sweden goor fiid ah. sawir: Sawirle: JONAS EKSTRÃMER / TT
Xisbiga SD oo markii ugu horeeysay ka hadlay arrinkii Egor Putilov
Ammaanka baarlamanka oo laga doodey
La cusbooneeyay onsdag 28 september 2016 kl 16.34
La daabacay onsdag 28 september 2016 kl 09.39
Hor-joogeyaasha xil-dhibaannada baarlamanka ee xisbigiyada xubnaha ku leh ayaa maanta kulan ka yeelan doona arrin beryahan lagu muransanaa ee la xiriiray howl-wadeen xisbiga SD uga howl-geli jiray xoghaynta xisbiga.
Howl-wadeenkana oo dhowaantan is casilay ayaa isku magacaabi jiray magacyo ey ka mid yihiin Egor Putilov, oo sida ay sheegeen culimo ammaanka ku takhasusay inuu halis ku ahaa ama looga tuhun-qabi karey ammaanka baarlamanka.
Halka uu dhanka kale markii ugu horreeysay uu xisbiga Sverigedemokaraterna faallo ka bixiyay amuurtaa ninkaa la xiriirta. Iyadoona ay idaacadda Radio Sweden ay saaka dood ku dhex martay hoggaamiyaha xubnaha baarlamanka ee xisbiga SD Mattias Karlsson iyo siyaasiga Anders Jonsson oo ka tir-san xisbiga Center-ka (C).
Af-hayeenka baarlamanka Sweden ayaa maanta sidoo kale kulan la qaadan doona hor-joogeyaasha xildhibaannada xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka, halkaasina oo ey uga wada xaajoon doonaan ammaanka baarlamanka. Kulanka ayaa sidoo kale la fileyaa in lagu sharuudeeyo xisbiga SD inuu jawaab cad oo waadix ah ka bixiyo ninkan isku magacaabay Egor Putilov, kana howl-geli jiray ka hor intii aannu jagada iska casilin xog-haynta xisbiga SD. Magaca Egor Putilov ayaa ah magac ku-tiri ku teen ah oo uu ninkaasi isticmaali jiray kolka uu maqaalo ku qorayo war-geeysyo ka soo baxa waddammada Sweden iyo Ruushka, halka uu xog-haynta xisbiga SD uga howl-geli jiray magaciisa dhabta ah.
Laanta wararka Ekot ee idaacadda Radio Sweden oo toddobaadkii ina dhaafay daaha ka qaaday inuu ninkan isku magacaabay Putilov ka macaashay dhowr milyan oo koron guri uu ka iibsaday ganacsade ruusha ah oo xiriir dhow la leh hayadaha Ruushka, isla-markaana dhowaantan xabsi lagu xukmey. Iyadoona oo xaqiiqdaa dabadeed ey culimo dhowr ah ee dhanka ammaanku sheegtay inuu noqon karo shakhsi tuhun laga qabi karo. Hase yeeshee uu Egor Putilov dhaleeceeyntaa iska dheereeyay, isla-markaana uu sabtidii ina dhaaftay uu war saxaafadeed ku sheegay inuu isaga tagay howshii uu hayay xisbiga SD.
Xisbiyada ayaa u madax-bannaan iney baaris ku sameeyaan cidda ey doonaan iney ka howl-geliyaan xog-haynnadooda ee xarunta baarlamanka, waana nidaam daciifinaya ammaanka, sida ay aamin-san yihiin culimo dhanka ammaanka ku takhasustay oo ay laanta wararka Ekot wareeysiyo la yeelatay. Iyagoona intaa raaciyay in ammaanku yahay mid ey dhibaato ka haysato xisbiyada qaarkood.
Mattias Karlsson, hor-joogaha xubnaha xisbiga SD ee baarlamanka ayaa aamin-san inuu xisbigiisu uu ka taxadaro ammaanka.
- Hase yeeshee weli wararkani waa kuwo isla-dhex mar un ah. Illaa iyo haddana ma jirto cid soo ban-dhigtay wax dembi ah oo uu galay iyo inuu ammaanka halis ku yahay, sida uu sheegay.
Putilov, wuxuu guri ka iibsaday ganacsade ruush oo dembiileh ah, isagoona ka macaashay lix milyan oo koron. Middaa ayaa shaki gelinaysa inuu ammaanka halis ku noqon karo, sida ay baahisay laanta wararka Ekot.
- Culuun dheeri ah kama hayo sida uu ganacsiga gurigaasi u dhacay, hase yeeshee waxaan qabaa inuu la yaab ahaa. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay in dhanka kale loo baahan yahay in la xaqiijiyo dhumucda baarista shakhsiga lagu sameeyneyo kolka la dooneyo in la shaqaaleeyo. Halkee xad u ah baahida ammaanka loo qabo iyo inaan meel lagaga dhicin shakhsiyadda ruuxa?. Ma waajib baa in la dhex dabaasho howl/ganacsi walba oo uu shakhsigu soo qabtay. Muddo intee le'eg ayaa noloshiisa dib loogu noqon?. Waa su'aalo loo baahan yahay iney dhammaan ka fekeraan xisbiyada oo dhami. Waana mid aan ka fal-celinayo marka guud ahaan la isugu geeyo. Hase yeeshee su'aashu waxay tahay in annagu shaqa-bixiye ahaan aannu xaq u leenahey inaannu baaris ku sameeyno dhammaan nolosha shakhsiga, sida uu sheegay.
Hor-joogaha xubnaha xildhibaannada ee xisbiga Center-ka Anders W Jonsson ayaa aad u dhaleeceeyay hoggaanka xisbiga SD.
- Arrinkani wuxuu ku saabsan yahay muwaadin ruush ah oo Sweden yimid shaqana ka raadsaday hayadda magaceeda loo soo gaabiyo MSB ee u diyaar-garowga ammaanka iyo masiibooyinka. Shakhsi wata shan magacyo oo kala duwan oo weliba qoraallo ku daabacay magacyo aan kuwiisa aheyn. Marka ma arrin iska caadi baa inuu ka howl-galo xisbiga SD. Xitaa ma aanay qancin kolkii la caddeeyay inuu lix milyan uu ka helay dembiile ganacsato ruush ah. Xitaa markaa ayaannu xisbiga SD ku yeerin gambaleel. Iminka wayaa loo baahan yahay inuu xisbiga SD uu turubka miiska soo wada saaro oo uu daaha iska qaado. Maxay kala socdaan ninkan la baxay Putilov, lacagta maxaa loo isticmaalay. Mana tahay mid loo dul-qaadan karo in howl-wadeen u shaqeeya xisbiga SD uu lix milyan ka qaado dadyow u adeegeya danaha dembiile ruush ah?, sida uu hadalka u dhigay.
Mattias Karlsson ayaa sheegay inuu xisbigiisu kala tashaday hayadda nabad-sugidda ee Säpo intii aan Putilov la shaqaaleyn.
- Mar walba oo ruux la shaqaaleeyneyo waxaannu Säpo ka codsanaa in diiwaanka laga baaro. Waxaannu ka baarnaa dadyoowga leh qoraallada sirta ah, hase yeeshee Putilov arrinkaa ma lahayn. Sidoo kale sidii uu doono uguma mushaaxi karin dhismaha baarlamanka, sida wararka lagu sheegey. Masuuliyadda annaga naga saarnayd waxaan aamin-sanahay in aannu ka soo baxney, sida uu sheegay Mattias Karlsson.
Isha/ Ekot, P1 Morgon.
Putilov oo looga baqayey ammaanka barlamaanka oo ka tagay shaqadii u hayey SD
Wakaaladda socdaalka oo dib u eegi doonta kiisaskii Putilov
Habka baarista howlwadeennada xisbiga SD ee baarlamanka